Global Voices teny Malagasy » Lasa Nisarika Ny Sain’ny Rehetra Ny Fihenan’ny Farihy Urmia Ao Iran, Noho Ny Nataon’i Leonardo DiCaprio Avy Any Hollywood · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Mey 2016 12:17 GMT 1	 · Mpanoratra Tori Egherman Nandika miora
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Fampandrosoana, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana, Zavakanto & Kolontsaina
#Iran : Misaotra @LeoDiCaprio  nisarika ny sain'izao tontolo izao ho amin'ny Farihy Urmia. Ilaina ny tolo-tanana rehetra. Tohizo ny asa tsara
Misaotra betsaka amin'ny fanehoankevitrao @LeoDiCaprio , fara fahakeliny olona iray no mandre ny fitarainanay!
ilaina ny manao zavatra bebe kokoa mba hanavotana ny #urmialake  / #FarihyUrmia !
Ny mpampiasa twitter @Elxan89  dia nizara ilay lahatsary In Memory of Urmia Lake (Ho Fahatsiarovana Ny Farihy Urmia) .
Donakely ho an'i @LeoDiCaprio  noho ny fisarihan-tsaina ho amin'ny #FarihyUrmia  ao #Iran  tamin'ny lahatsorany farany, voaray hatraiza hatraiza tany Iran.
Rehefa alefan'i @LeoDiCaprio  amin'ny Instagram ny tanindrazanao & ny mpiray tanindrazana aminao manapaka ny @instagram-ny 
Ao amin'ny sisintany manasaraka an'i Iran sy i Torkia no misy ny Farihy Urmia. Efa ela izy io no singa iray manandanja ho an'ny mponina ao amin'ny faritra. Loharanom-bola sy rehareha ara-kolontsaina ilay farihy. Nahatonga ahiahy teo amin'ny mponina any Torkia sy Iran ny fiharatsiany. Tamin'ny 2011, nitarika fihetsiketsehana faobe izany. Fantaro bebe kokoa ao amin'ny Arseh Sevom sy Global Voices  ny momba ireo fihetsiketsehana.
Mety tsy ho afaka ny hamonjy ny farihy i Leonardo DiCaprio. Nefa misy olona maro any Iran sy manerana izao tontolo izao miasa mba hampiverina azy. Tamin'ny resadresaka niarahana tamin'ilay Siantifika Amerikana , Hossein Akhani , manampahaizana momba ny zava-mananaina ao amin'ny Oniversiten'i Tehran, dia nanontaniana izy momba ny hetsika nataon'ny governemantan'i Iran mba hamonjena ilay farihy. Hoy izy:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/05/30/82300/
 In Memory of Urmia Lake (Ho Fahatsiarovana Ny Farihy Urmia): https://youtu.be/XDJJkR8KGE4
 Global Voices: https://globalvoicesonline.org/2011/08/28/iran-protests-to-save-lake-urmia-reignited/
 Siantifika Amerikana: http://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/saving-iran-s-precious-lake-urmia/
 Iran: Fihetsiketsehana Hamonjena ny Farihy iray Ritra: https://mg.globalvoices.org/2011/09/06/21876/
 Iran: Fihetsiketsehana Vaovao mba hamonjena ilay farihy efa ho faty (Fr): https://globalvoices.org/2011/09/03/iran-new-protests-to-save-dying-lake/
 Ny Vaovao Farany Momba Ny Olan'ny Farihy Urmia ao Iran: https://mg.globalvoices.org/2015/04/08/69009/
 Iran: “Ndeha Hiaro Ny Farihy Urmia Amin'ny Ranomasontsika”: https://mg.globalvoices.org/2012/05/28/33561/